Dental Implant – D-Royal
November 19, 2020 December 1, 2020 Hap EyeServices
Dental Implant or သွားမြစ် အစားထိုးတိုင်စိုက်ကုသခြင်း သိကောင်းစရာ။
Dental Implant ဆိုသည်မှာဆုံးရူံးသွားသော သွားနေရာတွင် ဘေးသွားကို တိုက်စားခြင်းမပြုပဲ တစ်ချောင်း မရှိလျှင်တစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်းမရှိလျှင် နှစ်ချောင်း၊ ၃ချောင်း မရှိလျှင် ၃ချောင်း တည်းသာ သွားဖုံးရိုးထဲကို titanium သတ္တုတိုင်‌ထည်‌ကာ အပေါ်ကနေ ကြွေသွားတပ်ပေးတဲ့ သွားအသေစိုက်နည်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
1လခွဲ ကနေ ၃လကြာလျှင် သွားဖုံးရိုးထဲကို ထည့်ထားသော implant titanium နဲ့ အရိုးသားက သဟဇာတဖြစ်သွားတဲ့အတွက် သွားဖုံးရိုးပြဿနာမဖြစ်မချင်း ပြန်မပြုတ်ထွက်တော့ပါဘူး။
ပြီးလျှင် သွားတု (Crown) တပ်လို့ရပီး ပုံမှန်အတိုင်းမိမိသဘာဝသွားကဲ့သို့ စိတ် ကြိုက်စားသုံးနိုင်ပါသည်။
Dental Implant ၏ ကောင်းကျိုးများ????????????
(1) သဘာ၀သွားနှင့် Implant ၏ဖွဲ့စည်းပုံချင်းတူသဖြင့် မိမိ၏ သဘာဝသွားကဲ့သို့ အသုံးပြု၍ရခြင်း၊ သဘာဝသွားကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း စသော စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
(2) နှုတ်ထားသောနေရာအား ပြန်လည်အစားထိုးရန် ဘေး၂ဘက်ရှိ သွားအကောင်းများအား တိုက်စားပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
(3) သွားတစ်ချောင်း မရှိတော့လျှင်လည်း သွားစိုက်နိုင်ခြင်း။ အံကပ်မတပ်ချင်သူများ အတွက်လည်း သင့်တော်ခြင်း
(4) နှုတ်ထားသောနေရာရှိ အရိုးများနိမ့်ကျမသွားစေရန် ထိန်းပေးထားနိုင်ခြင်း
(5) သွားအစစ်နဲ့ ခွဲမရအောင်ဆင်တူ ခြင်း။
(1) Dental Implant စိုက်လျှင် အရမ်းနာမှာလား။
မကုသခင် ဆေးအရင်ကြိုသောက်ခိုင်းထားပီး ထုံဆေးဖြင့်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ်ကနေ ၃၀မိနစ်သာ ရှိသောကြောင့် Dental Implant ကုသမှုခံယူသူတိုင်း Feedback ကတော့ သွားနူတ်တာလောက်တောင် မနာကျင်ပါဘူး ဟုပြောကြပါသည်။
(2) ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပါသလဲ။
လူနာတစ်ယောက်ဟာ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး ကောင်းမွန်နေမယ်၊ implantologist နဲ့ ၆လ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်တစ်ခါ ပုံမှန်စစ်ဆေးနေမယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(3) ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ implant မလုပ်သင့်ပါသလဲ။
ဆီးချိုရောဂါ ပြင်းထန်သူများ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ကွမ်းအလွန်အကျွံ သုံးစွဲသူများ၊ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး မကောင်းသူများ မလုပ်သင့်ပါ။
(4) ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားပါသလား။
ကုန်ကျစရိတ်က သာမန်သွားအစွပ်ထက် ပိုကုန်ကျတယ်ဆိုပေမယ့် အမျိုးအစား ၃မျိုး (Korea????????, Italy????????, Switzerland ????????)ရှိတာကြောင့် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။
Implant စိုက်ချင် ပီး တလုံးတစ်ခဲမပေးနိုင်သော လူနာများ အတွက် Implant crown မတပ်ခင် ကြားထဲမှာ အရစ်ကျခွဲခွဲ ပီး (installment plan) သွင်းလို့ရတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်း တစ်ရပ်လည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသို့ တကူးတက သွားစိုက်စရာမလိုတော့ပဲ ပြည်တွင်း မှာပဲ Quality ကောင်းကောင်းဖြင့် သင့်တင့်သော ဈေးနူန်းတစ်ရပ် ဖြင့် ကုသမှုခံယူနိုင်ပါပီး။
အသေးစိတ်သိချင်တာကို ???????? Tokyo Medical & Dental University မှ Implant ပါရဂူဘွဲ့ရ Implantologist နဲ့ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်တာမို့လို့ ဆေးခန်းမှာ ရက်ချိန်းယူပြီး ကြွခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းတွင် တခါသုံးပစ္စည်းများနှင့် သွားကိရိယာများကို ပိုးမွှားကင်းစင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့်အိတ်(Sterilisation Pouch)ထဲသို့ထည့်ပီး စနစ်တကျ ပိုးသတ် သန့်စင်ထားသောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာလာရောက်ကုသနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
Chat Box သို့မဟုတ် 09979005387 09 777 870 880ကို
Address : အမှတ်(၅၀)၊ မြေညီထပ် ၊ အလယ်ဘလောက် ဌာနာလမ်း၊ နတ်စင်လမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ 099 7900 5387 09 777 870 880 (one way ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ဌာနာလမ်း or နတ်စင်လမ်းမှ ပတ်ဝင်ပေးပါရန်)
ဆေးခန်းဖွင့်ချိန် – မနက်၁၀နာရီ- ည၈နာရီ (ပိတ်ရက်မရှိပါ) (ပိတ်သည့်ရက်ကို Page တွင်ကြေညာပေးပါမည်)